Aoka ianao ho Fitiavana mandrakariva | Fondation des Choisis de Jésus
Aoka ianao ho Fitiavana mandrakariva
1B_27: R’ilay Bitikako, aoka ianao ho Fitiavana mandrakariva sy Fitiavana amin’ny toerana rehetra. Andao hiaraka miditra ao anatin’ny firavoravona lehibe isika, satria Fitiavana Aho, Fitiavana ianao, Fitiavana isika. Izany no asa tanterahiko, asa ataonao, asa ataontsika miaraka. Ho voninahitry ny Raintsika, dia ho lasa IRAY ao anatin’ny Fitiavana isika. Anao ny Fitiavako rehetra.